(Akhriso.) Safiirka Cusub ee United Arab Emirates (UAE) Hassan Yaasiin Hirad ayaa laga qoray warbixin xiiso badan | Saxil News Network
(Akhriso.) Safiirka Cusub ee United Arab Emirates (UAE) Hassan Yaasiin Hirad ayaa laga qoray warbixin xiiso badan
September 30, 2018 - Written by qaasim Mukhtar
(Saxil.news.com) Safiirka Cusub ee United Arab Emirates (UAE) Hassan Yaasiin Hirad ayaa laga qoray warbixin xiiso badan oo ay daabaceen Warbaahinta ugu caansan Imaaraadka waxaana ay soo qaateen Hadal kooban oo uu ka yidhi xidhiidhka labada dal.
Safiirku waxa hadalkiisa soo qaatay oo qaadaa dhigay Warbaahinta ugu Caansan Emirate ka Sida Khaleejka iyo Alarabia waxaannu ka hadlay Xidhiidhka labada Dal isagoo aad ugu mahadnaqay Madexweynaha Khalifa Bin Zayid Al Nahyan iyo golihiisa wasiiradda waxaannu safiirku sheegay in Imaaraadku caawinayeen saddexdii qarni ee u dambeeyay Bulshaddda soomaalilaand oo ay u fidiyeen gargaar ibnu aadanimo kii ugu wacnaa.
Waxaannu safiirku ka codsadday Imaaraadka innay sii laban laabaan taageeradda iyo caawinta dawladda iyo shacabka soomaalilaan.
Waxa kale oo uu Hassan Hirad ka hadlay Maalgalinta Dekadda Berbera oo dhawaan la bilaabo doonno iyo xidhiidhka horumarineed ee ay wadda leeyihiin Labada dal isagoo aad u amaanay xidhiidhkaas soo jireenka ah ee saddexda Qarni ah ugana mahadnaqay Walaalahooda Imaaraadka.
Waxa kale oo uu safiirku ku amaanay Gurmadka iyo gargaarka ay u fidiyeen walaalahooda wakhtiyaddii adkaa ee Duufaantii Sagar. Safiirka UAE Mr Hassa Isagoo qeexay innay maalgashi ganacsi ay bilaabi doonnaan Imaaraadku.
Safiirku Wuxuu ka codsaday dawladda UAE innay sii waddaan wada shaqaynta iyo caawinta ibnu aadanimo ee ay horeba u bixin jireen waannu ku amaanay Wada shaqaynta iyo Xidhiidhka fog ee ay lahaayeen.
Safiirka cusub ee Emaraatka Hassan ayaa ah wiil dhallinyaro, Aqoon badan kaas oo la filayo innuu guullo waaweyn oo aqoonsigu ka mid yahay ka keeni doonno imaaraadka isagoo la kulmay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda imaaraadka una muujiyay bisayl iyo wax wada qabsi.
Rakad Mxd Sultan farxaanmxd@gmail.com